လူတဈယောကျကို ဘယျသောအခါမှ အပျေါယံကွညျ့ပွီး မဆုံးဖွတျပါနဲ့ – Shinyoon
စာအုပျတဈအုပျရဲ့ တနျဖိုးက အဲ့ဒီစာအုပျရဲ့ အဖုံးမဟုတျဘူး အထဲမှာ ရှိတဲ့ စာတှကေိုကွညျ့ပွီးမှ တနျဖိုးဖွတျလို့ရတာပါ
ဒီလိုပါပဲ . . . လူတှကေိုလဲ အပျေါယံ အ၀တျအစားတှကေို ကွညျ့ပွီးပဲဖွဈဖွဈ နပေုံထိုငျပုံကို ကွညျ့ပွီး လူတဈယောကျကို တနျဖိုးကို လှယျလှယျလေး ကောကျခကျြခလြိုကျလို့မရဘူး လူတဈယောကျရဲ့ ကောငျးခွငျးဆိုးခွငျးကို သိဖို့ အခြိနျလိုပါတယျ
လူတခြို့က အပျေါယံအမွငျအရ အရမျးကွညျ့လို့ရှုလို့ကောငျးတယျ တကယျပေါငျးတဲ့အခါကြ စိတျဓာတျက ပုတျသိုးနတောပဲ အပွောခြိုခြိုလေးနဲ့ အစစအရာရာ အလြှော့ပေးနတေိုငျး ကိုယျ့ကို ခဈြလှနျးလို့ ကွငျနာလှနျးလို့ ဆိုပွီး တဈယူသနျလဲ မတှေးစခေငျြဘူး
အဲ့ဒီ အပွောခြိုခြိုလေးတှနေောကျမှာ ဘာစတေနာမှ မပါဘူး ကိုယျ့ဘ၀ကို ပကျြစီးရာ ပကျြစီးကွောငျးတှပေဲ တှရေ့တတျတယျ တခြို့စကားတှကြေ နားထောငျရ နဲနဲခကျတတျတယျ ဒါပမေယျ့ အမှနျကို မွငျတတျရငျ စတေနာတှပေါမှနျး အသအေခြာမွငျနိုငျပါတယျ
ကိုယျ့ဘ၀ကောငျးဖို့ သူ့ကို မုနျးခငျြလဲ မုနျးပါစေ အရှိကို အရှိအတိုငျးပွောရဲတဲ့ သတ်တိ လူတိုငျးမှာ မရှိကွဘူး လူတဈယောကျအကွောငျးကို လှယျလှယျလေး ကောကျခကျြခမြပဈလိုကျတာ ကောငျးပါတယျ
ကွာကွာပေါငျးကွညျ့ မကောငျးမှနျးသိရငျ ကိုယျ့ဘကျက ဆငျခွငျ ဘယျလိုမကျြနှာဖုံးမြိုးမဆို အခြိနျတနျရငျတော့ ကှာကလြာတတျပါတယျ ဥပမာ – အလှဆုံး ပွုံးပွတတျတဲ့ နှုတျခမျးတှကေ ကိုယျဒုက်ခလို့ မဟသေးခငျ မကျြနှာ လှဲသှားကွသလိုမြိုးပေါ့ ။
အတှငျးစိတျက ပုတျနတေဲ့အခါ ဘယျလောကျပဲဖုံးဖိထား ဖုံးဖိထား အခြိနျတနျရငျတော့ အပုတျနံ့က သငျးလာမှာပါပဲ ။ဒါကွောငျ့ . . . လူတဈယောကျကို ဘယျသောအခါမှ အပျေါယံကွညျ့ပွီး မဆုံးဖွတျပါနဲ့ သူကောငျးတယျ ဆိုးတယျဆိုတာ အခြိနျတနျတော့ သရုပျမှနျပွတတျပါတယျ ။
စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ တန်ဖိုးက အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ အဖုံးမဟုတ်ဘူး အထဲမှာ ရှိတဲ့ စာတွေကိုကြည့်ပြီးမှ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတာပါ
ဒီလိုပါပဲ . . . လူတွေကိုလဲ အပေါ်ယံ အ၀တ်အစားတွေကို ကြည့်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် နေပုံထိုင်ပုံကို ကြည့်ပြီး လူတစ်ယောက်ကို တန်ဖိုးကို လွယ်လွယ်လေး ကောက်ချက်ချလိုက်လို့မရဘူး လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကို သိဖို့ အချိန်လိုပါတယ်
လူတချို့က အပေါ်ယံအမြင်အရ အရမ်းကြည့်လို့ရှုလို့ကောင်းတယ် တကယ်ပေါင်းတဲ့အခါကျ စိတ်ဓာတ်က ပုတ်သိုးနေတာပဲ အပြောချိုချိုလေးနဲ့ အစစအရာရာ အလျှော့ပေးနေတိုင်း ကိုယ့်ကို ချစ်လွန်းလို့ ကြင်နာလွန်းလို့ ဆိုပြီး တစ်ယူသန်လဲ မတွေးစေချင်ဘူး
အဲ့ဒီ အပြောချိုချိုလေးတွေနောက်မှာ ဘာစေတနာမှ မပါဘူး ကိုယ့်ဘ၀ကို ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းတွေပဲ တွေ့ရတတ်တယ် တချို့စကားတွေကျ နားထောင်ရ နဲနဲခက်တတ်တယ် ဒါပေမယ့် အမှန်ကို မြင်တတ်ရင် စေတနာတွေပါမှန်း အသေအချာမြင်နိုင်ပါတယ်
ကိုယ့်ဘ၀ကောင်းဖို့ သူ့ကို မုန်းချင်လဲ မုန်းပါစေ အရှိကို အရှိအတိုင်းပြောရဲတဲ့ သတ္တိ လူတိုင်းမှာ မရှိကြဘူး လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို လွယ်လွယ်လေး ကောက်ချက်ချမပစ်လိုက်တာ ကောင်းပါတယ်
ကြာကြာပေါင်းကြည့် မကောင်းမှန်းသိရင် ကိုယ့်ဘက်က ဆင်ခြင် ဘယ်လိုမျက်နှာဖုံးမျိုးမဆို အချိန်တန်ရင်တော့ ကွာကျလာတတ်ပါတယ် ဥပမာ – အလှဆုံး ပြုံးပြတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက ကိုယ်ဒုက္ခလို့ မဟသေးခင် မျက်နှာ လွဲသွားကြသလိုမျိုးပေါ့ ။
အတွင်းစိတ်က ပုတ်နေတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ပဲဖုံးဖိထား ဖုံးဖိထား အချိန်တန်ရင်တော့ အပုတ်နံ့က သင်းလာမှာပါပဲ ။ဒါကြောင့် . . . လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်သောအခါမှ အပေါ်ယံကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ သူကောင်းတယ် ဆိုးတယ်ဆိုတာ အချိန်တန်တော့ သရုပ်မှန်ပြတတ်ပါတယ် ။
မေးကြည့်ပါ ငါ ရော တကယ်ပျော်နေရဲ့လား ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးပေါ့